China ASA Materials Synthetic Resin ခေါင်မိုးကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | JIAXING
Trapezoid PVC ခေါင်မိုးစာရွက်
Polycarbonate Hollow စာရွက်
သုံးနံရံ PC Hollow Sheet
လေးနံရံ PC Hollow Sheet
Multilayer PC Hollow စာရွက်
Honeycomb ကို PC Hollow စာရွက်
Crystal ကို PC ဆွန်းစာရွက်
ဖောင်းကြွ PC ကိုအစိုင်အခဲစာရွက်
ပြားချပ်ချပ် PC ကိုအစိုင်အခဲစာရွက်
နှစ် ၃၀ အာမခံချက် Asa Pvc P ...
Rome အမျိုးအစား ASA Synthetic Res ...
အကျယ် 900-1130mm UPVC Trape ...
အမြင့်လှိုင်း pvc ပလပ်စတစ် roo ...
အကျယ် 900mm 1130mm upvc pla ...
မျက်နှာပြင်ပစ္စည်း ASA ဒြပ်ဗဓေလသစ်
အောက်ခြေပစ္စည်း ဝတ်ဆင် - ဒဏ်ခံပစ္စည်း
အထူ 2.3mm, 2.5mm, 3.0mm
အကျယ် 720mm, 900mm, 910mm, 930mm, 940mm, 1050mm, 1088mm, 1130mm
အရောင် လိမ္မော်ရောင်၊ နီနီ၊ အနီရောင်ပူ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကြွေပြားပုံစံ တော် ၀ င် / စပိန်ပုံစံ၊ ရိုးမားစတိုင်၊ ဥရောပပုံစံ၊ လှိုင်းအသေးစား၊ ကြီးမားသောလှိုင်း၊
လျှောက်လွှာနယ်ပယ် တောင်စောင်းများ၊ အိမ်များ၊ ခြံများ၊ ဥယျာဉ်များ၊
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်မြင့်မားသောဗဓေလသစ်နှင့်အဓိကဗဓေလသစ်တို့မှာအလွန်မြင့်မားသောချေးမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မိုးနှင်းများနှင့်နှင်းများတိုက်စားခြင်းကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိခြင်း၊ ၎င်းသည်အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့်ဆားကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများ၏ချေးမှုကိုကြာရှည်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြင်းထန်သောဆားမှုန်ရေမွှေးတိုက်စားခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောလေထုညစ်ညမ်းမှုရှိသောဒေသများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
2. Excellent က Anti- ဝန်စွမ်းဆောင်ရည်
ဓာတုဗဓေလသစ်စေးအတုံးများသည်ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အပူချိန် ၁.၅ မီတာအမြင့်ရှိ ၁ ကီလိုဂရမ်လေးသောသံမဏိသံတူများသည်အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲလွတ်သွားသည်။ အေးခဲပြီးအရည်ပျော်စေသောသံသရာ (၁၀) ခုပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းသည်အခေါင်း၊ အဖု၊ အခွံနှင့်အက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။
4. Self- သန့်ရှင်းရေး
ဒြပ်ပါသောဗဓေလသစ်စေးပြား၏မျက်နှာပြင်သည်သိပ်သည်းချောမွေ့ပြီးဖုန်စုပ်ယူရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်ကြာပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မိုးသစ်သည်အသစ်စက်စက်အဖြစ်ဆေးကြောသန့်စင်သည်။ ရွာသွန်းပြီးနောက်မိုးရွာပြီးနောက်မိုးရေများဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းမရှိပါ။ ။
ရိုးရှင်းသော tools များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၆။ မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် B1 သို့ရောက်ရှိသည်
ရှေ့သို့ ASA Coated Synthetic ဗဓေလသစ်မျက်နှာပြင်အမိုးကြွေပြားများ PVC ခေါင်မိုးကြွေပြား
နောက်တစ်ခု: Asa PVC ပလပ်စတစ်အစေးအမိုးကြွေပြား
သုံးလမ်းခေါင်အဘို့အ Pvc Asa ခေါင်မိုး Sheet ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဘေးထွက်အဖုံးအတွက် PVC Asa ခေါင်မိုးအပိုပစ္စည်းများ -
ဒြပ်ဗဓေလသစ်စေးခေါင်မိုး tile ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဖယ်ရှားပစ်လေးလမ်းများအတွက် Pvc Asa ခေါင်မိုး Sheet ဆက်စပ်ပစ္စည်း ...
Roma Roofing Tile ပလပ်စတစ် UPVC ခေါင်မိုးစာရွက်
ခေါင် ဦး ထုပ်များအတွက် Pvc Asa ခေါင်မိုး Sheet ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဒြပ်ဗဓေလသစ် tile ကိုနည်းပညာနောက်ခံ
ဒြပ်ဗဓေလသစ် tile ၏အားသာချက်များ
အခန်း ၁၁၃၊ F6၊ အမှတ် ၁၆ Xuelian လမ်း၊ Wanxin လမ်း၊ Dongli ခရိုင်၊ Tianjin - China